PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-10-14 - Iyaqina eyokungaholi kwabaseSABC
Iyaqina eyokungaholi kwabaseSABC
Isolezwe ngeSonto - 2018-10-14 - IZINDABA - DELI MNCWABE
BANGASE bawudle belambile uKhisimusi abasebenzi beSABC kulandela izindaba ezithi bangase bangayitholi imiholo yezinyanga ezintathu nebhonasi kulo nyaka.
Lezi zindaba ezimbi ziqinisekiswe nguSihlalo weBhodi yeSABC uMnuz Bongumusa Makhathini.
Uthe abasebenzi bangase bangayitholi imiholo yezinyanga ezithathu ezilandelayo ngenxa yezinkinga zemali iSABC ebhekene nazo.
UMakhathini udalule ukuthi zonke lezi zinkinga zidalwa wukuthi iSABC ibhekene nezikweletu ezinkulu.
“Njengoba ngikhuluma nje iSABC ibhekene nezikweletu ezingaphezu kukaR1.3 billion kanti nohulumeni awukazibophezeli ekuyitakuleni.
Ngaphandle kukahulumeni, iSABC inenkinga ekutholeni usizo lwemali emabhange,” usho kanje.
Isolezwe ngeSonto ngeledlule libe ngelokuqala ukubika ngodaba lokuthi abasebenzi bangase bangaholi. Le nkinga yemali kubikwa ukuthi ayigcini nje ngokubheka abasebenzi kodwa nezinkampani ezikhiqiza izinhlelo ezisakazwa khona zizothinteka.
UNobhala Jikelele weCommunications Workers Union (CWU) uMnuz Aubrey Tshabalala uthe ziyashaqisa lezi zindaba.
Isolezwe ngeSonto libike kabanzi ngosizi izinkampani ezikhiqiza izinhlelo ezike zabhekana nazo. Phakathi kwezinkampani ezingaphezu kuka-60 okuthiwa bezithinteka kubalwe nekhiqiza uZalo, iStained Glass Pictures.
Kwenzeka lokhu nje iSABC igcine yehlele ngezansi ngemuva kokuphoqwa yizinhlangano zezinyunyana ezimele abasebenzi iBroadcasting, Electronic Media & Allied Workers Union (Bemawu) neCWU ukuba imise uhlelo lokudiliza abasebenzi abangaphezu kuka-3000 nobekulindeleke ukuthi kwenzeke esikhathini esingangenyanga.
Lezi zindaba zivele emhlanganweni obungoLwesihlanu phakathi kwezikhulu zeSABC nezinyunyana ezimele abasebenzi iBemawu neCWU.
Ukuguqulwa kwesinqumo sokudiliza kudalwe wukuthi iSABC ayiyilandelanga imigudu efanele ngesikhathi ihlela ukudiliza.